Zvese nezve iyo Instagram Checkout
Instagram Checkout ikozvino inoshandiswa nemabhizimusi ese akakodzera muUS uye ichaenda pasirese munguva pfupi iri kutevera.
Iyo Checkout ficha inotibvumidza isu kutenga zvigadzirwa zvakananga kubva kune yedu Insta app. Kubva zvino zvichienda mberi, tinogona kuisa maodha edu zvakananga pa Insta kana isu tichiongorora zvitoro zvingatengeseka nemateki edu echigadzirwa.
Maererano ne Instagram, 130 miriyoni vashandisi vanodzvanya pane zvinotengwa zvinotumirwa mwedzi wega wega, uye hazvishamise kuti Instagram ikozvino yaisa basa ” Buda ” inowanikwa kumabhizinesi ese muUnited States.
Kuwedzera kwekuzivikanwa kwe “zvitoro zvinotengeswa” yakakurumidza kushandura Insta kuita e-commerce chikuva. Iyo Checkout ficha ikozvino inozadzikisa iyi shanduko uye kugadzirisa iyo mushandisi ruzivo rwekuti ive nani.
Iye zvino tava kukwanisa kubata tag yechigadzirwa yatinoda uye kubhadhara zvakananga pa Instagram kune icho chigadzirwa. Maitiro edu ekutenga haana kumbobvira akareruka pane chero imwe midhiya enhau.
Ivo vakachinja zvachose nzira yatinotenga uye nekushandura mashandisiro emakambani anoshandisa yavo Insta chitoro..
Kune varidzi vebhizinesi, iko kugona kukurumidza kushandura vateereri vavo kubva kungobhurawuza kuenda kuzvinhu zvekutenga vasina kusiya iyo Instagram app mhedzisiro mukuwedzera mitengo yekutengesa.
Mabhizinesi, iyo vanokurudzira uye vashandisi vanozoona nguva dzinonakidza nekushanda kwekubhadhara.
Unofanira here kushandisa Instagram Checkout?
Vazhinji vedu tanga tichishandisa iyo Insta chikuva chekushambadzira uye kushambadzira kwemakore akati wandei ikozvino., uye isu tinoziva nezvekukosha kwayakave kwakaita kune edu ekushambadzira nzira.
Asi shanduko dzichangoburwa dzegore rapfuura dziri kugadzirisazve chikuva ichi zvakanaka.. Haifanire kunge ichingova yekushambadzira chikuva.
Instagram Checkout ficha inopa vatengi vedu neyakareruka chikuva, kubva kwavanogona kutenga zvigadzirwa zvedu.
Gore rino, Instagram yakaedza kugadzirisa mabhizinesi nemabhureki zvakanyanya sezvazvinogona kuburikidza nedenda.
Vakagadzira mashandiro ezvitoro pasirese uye vakaburitsa kodhi yeQR kutibatsira kukura bhizinesi redu paInta.
Instagram yakataurwa kuti 80% yeakaundi anotevera bhizinesi account, izvo zvinotsanangura zvakajeka nei vakashanda nesimba kuona kuti isu tinogona kuwana zvakanyanya kubva papuratifomu yedu.
Heano maitiro evashandisi vanogona kutenga zvigadzirwa zvedu mune mashoma mashoma matanho:
Dzvanya pane icon yekutenga
Dzvanya pane chigadzirwa chinoratidzwa
• Tinya pane rejista yemari
Pinda kadhi ruzivo uye ruzivo rwekubhadhara
Dzvanya panzvimbo yekuodha
Maitiro Ekunyorera kweiyo Instagram Checkout?
Unogona kushandisa Instagram Checkout izvozvi muUnited States, asi unofanira kutanga wagadzirisa chitoro chako.
Akaundi yako saka yakabatana neako Facebook peji kana kuShopify, iko Insta inogona kutora yako catalog uye chigadzirwa ruzivo.
Insta inoshandisa ruzivo rwako kugadzira zvigadzirwa zvemavara ako kuti iwe ugone kutara zvigadzirwa zvako mumifananidzo yako, mavhidhiyo uye IGTV izvozvi.
Mushure mekubudirira kumisikidza chitoro chako, unogona kushandisa fomu iri pano kukumbira Checkout.
Kana usiri muUnited States, gadzirira uye gadzira yako chitoro. Tora musoro utange kushandisa iko kubhadhara mashandiro nekukurumidza painongotumirwa pasirese.
Maitiro ekuwana zvakanyanya kubva kune yako marejista emari
Tine mazano mashoma kuti iwe uwane zvakanyanya kubva pane yako Instagram Checkout ficha., uye nenzira iyi, iwe unogona kuve nechokwadi chekuwedzera kutengesa kwako futi.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Funga kumaka zvigadzirwa zvako mune ese mafomati mafomati
Usaganhurise mavara ako kana iwe uchida kuwedzera kutengesa kwako. Nguva dzose yeuka kumaka zvigadzirwa zvako mune yega yega fomati yezvinyorwa. Wana zvakanyanya kubva kumifananidzo nemavhidhiyo.
Nekugadzira iwo ma tag pane akasiyana mafomati mafomati, unoita shuwa kuti unosvika kune vanhu vazhinji sezvinobvira vanoona zvemukati.
Kunyanya zvigadzirwa zvako zvinoonekwa, izvo zviri nyore zviri kune vateereri vako kuti vatarise uye vatenge kubva kwauri kuburikidza neye Checkout ficha.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Kubatana pamwe nevanokurudzira
Kufuridzira kwakakura, uye vanoyemurwa zvakanyanya nevateveri vavo. Tinofanira kuvapa mbiri nekuti ivo vakanaka pane zvavanoita.
Vazhinji vavo vakabudirira mukuenderera mberi nekuvandudza mapuratifomu avo nekuita uye kugadzira zvigadzirwa zvepakutanga zvevateveri vavo vakavimbika.. Aya ndiwo mararamire avanowana, saka vanofanira kuziva chinhu kana zviviri.
Nekudyidzana nevanokurudzira uye vanogadzira maakaundi account avo vanogona zvakare kumaka zvigadzirwa zvakananga mune zvavo zvemukati, unogona kushambadza zvigadzirwa zvako zvinehasha papuratifomu yavo, asi nenzira chaiyo.
Kwete zvigadzirwa zvako chete zvinozoonekwa nekukurumidza nevateveri vavo, asi zvakare inzira yakanaka yekushambadza iwe, pasina kuyedza kutengesa zvigadzirwa zvako zvakananga.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Shandisa carousels
Kushandisa ma carousels ezve zvigadzirwa zvako kunogona kusvika kune vateereri vako nekukurumidza, asi zvinobudirira. Kunyanya kutaridzika kufadza mifananidzo yezvigadzirwa zvako, zvichave nyore kutora pfungwa dzevateereri vako.
Gadzira uye gadzira mifananidzo nezvimwe zvezvigadzirwa zvako. Nenzira iyi, haugone chete kumaka zvigadzirwa zvishoma mune imwechete zvemukati, asiwo kuratidza izvi zvigadzirwa pamwechete uye nekukurumidza.
Kuchengeta uye kubhadhara mabasa anokurumidza kushandura Insta kuita yakakura chikuva kupfuura nakare kose. Ita shuwa yekugara wakatariswa uye uchizviziva iwe nezvose zviripo uye zvitsva zvinhu zvinoburitswa..
Iyo Instagram timu yakashanda zvakaoma kwazvo mukati memakore mashoma apfuura kuzadzisa zvaunoda uye zvaunotarisira, saka ita shuwa kuti iwe unotora zvizere mukana kune ese mabhenefiti ainofanira kupa.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramIGTV Shopping yave kuwanikwa pa Instagram
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramAuto Like Instagram: Bot Yekuda otomatiki Anofarira